प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Nc ईसा उद्योग र ट्रेड कम्पनी
हामी एक कम्पनी हो जुन उत्पादन र व्यापारको संयोजन हो, उद्योग र ट्रेड एकीकरण व्यापार समावेश गर्दछ।
तपाईंको कारखानाले गुणवत्ता नियन्त्रणको लागि कसरी गर्छ?
गुण हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी पूर्व उत्पादन पुष्टि गर्नेछौं जस्तै कपडा, acceossies र आकार र मुद्रण र कढ़ाई को ढाँचा, अनुमोदनका लागि पठाइएको पूर्व उत्पादन भौतिक नमूना। उत्पादन अघि, हाम्रो QA ले कारखाना वा कार्यशालामा यस अर्डरका केही मुख्य बुँदाहरूलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनेछ। त्यसो भए हामी १ लाई ग्यारेन्टी गर्न थोक गर्व गर्न अन-लाइन निरीक्षण गर्छौंST थोक उत्पादन उत्पादन योग्य छ; अन्तमा, जब बल्क उत्पादन समाप्त हुन्छ, हामी हाम्रो भित्री QC निरीक्षण औपचारिक निरीक्षक रिपोर्ट गर्न को लागी गर्छौं र यदि आवश्यक छ भने, हामी पनि थोक उत्पादन नमूनाहरु पठाउनु भन्दा पहिले अन्तिम पुष्टिकरणको लागि पठाउन सक्छौं।
के म एउटा नमूना प्राप्त गर्न सक्छु? मैले यसको लागि तिर्नु पर्छ?
यदि हामीसँग कपडा वा समान नमूनाहरू छन् भने हामी नमूना नि: शुल्क पठाउन सक्छौं। यदि तपाईंसँग नयाँ ढाँचाको विकास छ भने हामी केवल नमूना मक अपको लागत स collect्कलन गर्दछौं। र शिपिंग लागत तपाईंको खर्चमा छ। नमूना लागत थोक उत्पादनबाट फिर्ता हुनेछ।
औसत डेलिभरी समय कति हो?
नमूनाका लागि २-7 दिन र बृहत उत्पादनको लागि १०--30० दिन; मात्रा १,००० पीसी बाट १०,००० पीसी सम्म मिलाएर करीव days० दिन हुन्छ। यदि १०,००० पीसी भन्दा बढि हो, यो सायद 45--6060 दिनहरू हुन्थ्यो।
के म रंगमा नियुक्ति गर्न सक्छु वा उत्पादनमा मेरो आफ्नै लोगो राख्न सक्छु?
OEM र ODM स्वागत छ। त्यो हाम्रो नारा हो: तपाईं डिजाइन, ISA बनाउँछ।
तपाईं हामीलाई प्रतिलिपि गर्न तपाईंको भौतिक कपडा पठाउन सक्नुहुनेछ वा तपाईं हामीलाई pantone र no नम्बरहरू बताउन सक्नुहुनेछ।
वा हामी तपाईंको डिजाइन प्राप्त गर्न सक्दछौं, तब तपाईको कन्फर्मेसनको लागि बल्कको लागि बन्दको रंग फेला पार्नुहोस्।
उत्पादनको बखत कसरी उत्पादन निरीक्षण गर्ने?
हामीसँग क्युसी डिपार्टमेन्ट छ कच्चा माल र समाप्त निरीक्षणको अनुसरण गर्न। विशेष प्रयोगशाला प्रयोगशालामा केहि आवश्यक परीक्षणहरू गर्न को लागी र color्ग स्थिरता र कपडा संकोचन; कुनै पनि तेस्रो पार्टी निरीक्षण यदि आवश्यक छ भने वास्तवमा स्वागत छ।
तपाईं TT, Paypal, L / C आदि मार्फत भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको सब भन्दा लोकप्रिय उत्पादन कुन हो?
हालसालै, घुमाउरो हेम पुरुषहरूको टी-शर्टको साथ लामो रेखा सबैभन्दा लोकप्रिय छ; सुख्खा फिट जाल पनी उच्चशक्ति शैली संग पनि भर्खरै तातो।
प्रायः हामी १०० पीसी / शैली स्वीकार्न सक्छौं। तर यदि QTY १००० पीसी भन्दा बढी गर्न सक्दछ, मूल्य धेरै प्रतिस्पर्धी हुनेछ।
के तपाइँसँग कुनै अडिट छ?
हाम्रो वास्तविकतामा बीएससीआई, डिज्नी एफमा, सेडेक्स, वाल-मार्ट, मार्वल, फोरभर कलेक्शन एडुइट छ।
तपाईको व्यापार सर्त के हो?
हामी EXW, FOB, CIF, DDP गर्न सक्छौं। अब संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि, हाम्रो DDP मूल्य तपाईंको लागि धेरै अनुकूल छ।